May 2019 - Glamorous Icon
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:२१
Monthly Archives: १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:२१
Home›१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:२१›१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:२१
१९८७ को ब्लकबस्टर चलचित्र ‘मिस्टर इंडिया’को रिमेक हुने जानकारी बोनी कपूरले दिएका छन् । अभिनेत्री श्री देवीको मृत्युको एक वर्षपछी श्री देवीको मृत्युपछी चलचित्र पुन: निर्माण गर्नुका पछाडी धेरै कारण भएको जानकारी दिँदै पहिले चलचित्रको रिमेक गरिने र त्यसपश्चात सिक्वेल निर्माण गरिने निर्माता बोनी कपुरले बताएका छन् । ३२ वर्ष पहिले ४ करोड भारु लगानी ...
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:१६
दर्शनको संघारमा आइपुगेको बलिउड प्रतिक्षित चलचित्र ‘भारत’ विरुद्ध दिल्ली सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सलमान खान, कट्रिना कैफ स्टारर यस चलचित्रको पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन (पि.आइ .एल.)ले शिर्षकलाई लिएर आपत्ति जनाएको हो । चलचित्रको शिर्षक ‘सेक्सन ३ प्रतिक र नामको (अनुचित उपयोगको रोकथाम) कानुन उल्लङ्घन’ बताइएको छ । जस अनुरुप ‘भारत’ शब्द व्यक्तिगत र ...
भीमफेदी गाइज र एलिसा शर्मा किरणको ‘रेलैमा’
किरण भुजेलको नयाँ गीत ‘रेलैमा’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोमा चर्चित डान्सिङ क्र्यु भीमफेदी गाइज र एलिसा शर्मा फिचर्ड छन् । गीतमा डिपी खनालको शब्द, भिम बिसीको सङ्गीत र रिकेश गुरुङको एरेन्जमेन्ट रहेको छ । गीतको गायनमा किरणलाई नितातर थापा मगरले साथ दिएकी छिन् । ‘रेलैमा’को भिडियोमा पवन सुस्लिंगको सिनेमाटोग्राफी एबम ...
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:०३
नायक अनुप विक्रम शाही पछिल्लो पुस्तामा चिनिएको नाम हो । चलचित्रको पर्दामा अनुपलाई लिएर काम गर्दा निर्माताले लगानी पनि राम्रै गरेका छन् । अनुप पनि अब आफूलाई निर्माताले १ करोडसम्म लगानी गर्न तयार भएको बताउँछन् । तर, अनुप विक्रम शाहीले अभिनय गरेका चलचित्रले बक्स अफिसमा खरो व्यापार गर्न सकेका छैनन् । अनुपलाई बरु दर्शकले खलनायकको ...
कुम्भ करण दिपक वली निर्देशित फिल्म ‘कुम्भ करण’ तीन शिक्षक र एक शिक्षिकाको प्रेम कथा वरीपरी घुमेको छ । सपना मिसको अगाडी घुम्ने करण नामका तीन शिक्षकको कथा रमाइलो छ । फिल्ममा नायिका निशा अधिकारी, नायक गौरव पहारी, कलाकारहरु भोलाराज सापकोटा र अभय बरालको मुख्य भूमिका छ । महेश दवाडीको कथा तथा पटकथा रहेको फिल्ममा ...
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १३:४६
असोज ३ लाई प्रदर्शन मिति सुरुमा चलचित्र ‘लभ डायरिज’को निर्माण टिमले तोकेको हो । सुशिल श्रेष्ठ, रुबिना थापाको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रलाई सौरभ चौधरीले निर्देशन गरेका हुन् । लभ स्टोरी जनराको यो चलचित्रमा नायक श्रेष्ठ विदेशमा बसेर विग्रिएको एक यूवाको भूमिकामा छन् । निर्माण भएको केही बर्ष वितिसक्दा पनि यो चलचित्रको निर्माण टिमले प्रदर्शन ...
बाबु र छोराको सम्बन्धको कथा प्रस्तुत गरिएको चलचित्र ‘आप्पा’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा दयाहाङ राई, सिद्धार्थराज तामाङ, एलोना काबो लेप्चा, तुलसी घिमिरे, अरुणा कार्की लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो । असारको १३ गतेबाट रिलिज हुन लागेको यो चलचित्रलाई अनमोल गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । ...
एबी इन्टरनेशनलको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘पासवर्ड’को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । यो चलचित्रलाई भदौको २७ गतेबाट रिलिज गर्ने तयारी यसको निर्माणपक्षको छ । सम्राट बस्नेतको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा अमित बस्नेत र हिराल जोशीको लगानी छ । चलचित्रमा कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने, बिष्णु देवाको कोरियोग्राफी छ । सौरभ लामाको छायांकन रहेको चलचित्रमा ...
गायक प्रकाश सपुत र गायिका शान्ति श्री परियारको नयाँ दोहोरी गीत गलबन्दी यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ‘हट टपिक’ बनेको छ । तर, गीतका गायक गायिकालाई ओझेलमा पार्ने गरी सर्वाधिक चर्चा भइरहेको छ, मोडल अञ्जली अधिकारीको । गीतको भिडियोमा अञ्जलीको ‘एक्सप्रेसन’ ले सबैलाई लठ्ठ बनाएको छ । उनी अति लजालु गाउँले युवतीको रुपमा देखिएकी छिन् । सामान्य ...
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:०६
26 years of age Apaysha Khadka who competed at Jewel of the World 2019 held in Philippines from May4to May 15 2019 has been successful to earn an award. In the competition Apaysha was able to bag first runner-up position in talent category. The Coronation night of Jewel of the World 2019 was ...